Ganacsatada suuqa Xoolaha magaalada Garissa oo ka cabanaya lac... | Universal Somali TV
Ganacsatada suuqa Xoolaha magaalada Garissa oo ka cabanaya lacagaha Canshuurta
Ganacsatada iyo Dulaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada Garissa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay sarakac ku yimid qiimaha canshuurta laga qaado ganacsada xoolaha taasi oo saameyn ku yeelatay noloshooda sadexdii sano ee la soo Dhaafay.
Mid ka mid ah dalaaleyda caanka ah oo lagu magacaabo Khaliif Jey ayaa sheegay in saraakiisha waaxda Canshuuraha ay laba laab ka qaadaan xoolaha marka loo eego tii dowladii hore uu hogaamin jiray barasaab Nadiif Jaamac Aadan.
Dhanka kale wuxuu tilmaamay in suuqa ay ku heysato nadaafad darro baahsan maadaama xoolaha mararka qaar baqtiya in mudo ah ay yaalaan suuqa taasi oo keeni karta caafimaad darro baahsan hadii aan waxba laga Qaban.
Gudoomiyaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka Kenya Dubat Cali Camey oo dhankiisa qadka taleefanka kula hadlay Universal Tv ayaa xaqiijiyay in ay jirto cabashada ganacsatada suuqa xoolaha Garissa.
Mr Dubat ayaa ugu baaqay xukuumada hoose ee deegaanka Garissa in talaabo ay u qaado waxkaqabashada nadaafad darrada ka jirta suuqa xoolaha ee magaalada Garissa.
Kan-xigaMas,uul kulan la qaatay Donald Trump ...
Kan-horeDowladaha Kenya iyo Itoobiya oo ka wa...
52,001,029 unique visits